काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकको ३ नयाँ शाखा कार्यालयहरु, गौरीगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ३, झापा स्थित गौरीगञ्ज शाखा, कनकाई नगरपालिका वडा नं ३, झापा स्थित सुरुङ्गा शाखा तथा ठाकुरबाबा नगरपालिका, वडा नं. १, बर्दिया स्थित भुरीगाँउ शाखाको आजमिति २०७५आषाढ २४गते एक समारोहका बिच समुद्घाटन सुसम्पन्न भएको छ ।
बैंकले हाल मुलुकभर २२५ शाखा कार्यालयहरु, २१८ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ११ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
बैंकको वासलातको आकार रू.१७८अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुलनिक्षेप करिब रू. १५०अर्बपुगिनिजीक्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरु मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक तथाकुलकर्जा करिब रू. १२०अर्ब सहितनिजीक्षेत्रका बैंकहरु मध्ये दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा बैंकले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ ।
हालसम्म यस बैंकमा ग्राहकको संख्या करिब ११ लाख ७५ हजार रहेको छ ।